KALA FAHAN WADDANI DHAARSAN & WADDANI DHAAWACAN: Qalinkii: Jamal A. Muse | Cadceed newssite
KALA FAHAN WADDANI DHAARSAN & WADDANI DHAAWACAN: Qalinkii: Jamal A. Muse
“Gorfeynta & Falanqeynta labada kala taggan iyo hoggaaminta jilicsan ee Xisbiga Waddani”
Qormada tan waxa aynu si qoto dheer ugu gorfaynaynaa labada kala taggan iyo hoggaaminta jilicsan ee xisbiga waddani ka kooban yahay, runtii waa labo qaybood oo aad u kala fog aragti ahaan iyo himilo ahaanba. Waa laba nooc oo bulshadu in badan ka war hayso, oo loo kala yaqaan Waddani dhaarsan iyo Waddani dhaawacan. Hadaba waxaan si tudhaaleysan u iftiimin doona daahanta iyo dahsoonaha siyaasadda sirgaxan iyo saymaha ku dahaadhan dheehashada astaanta iyo calanka xisbiga Waddani.
Waa qaybta ugu awoodda badan xisbiga guddihiisa dal iyo dibed ba, waa koox isku qancisay in gar iyo gardaba xukunka dalku gacanta u galo xisbiga waddani. Waa koox bulshada Somaliland qolo xisaabisa oo ku haasawda reer hebel waa innaga oo gobal hebel waa innaga oo hebel ciddi dooran mayso iwm.
Waa koox weli dabada sii haysata xisaabtii khaldanayd ee ay ku rideen Madaxwayne Rayaale sanadkii 2010-kii. Waa niman fadhiya daarad kasta oo xisbigu leeyahay waxaana kaw ka ah musdanbeedka awoodda badan iyo wiilasha idman ee ka ag dhaw guddoomiye ee Cirro.
Waa goob qolonimo lagu faano, balse aan qarannimo lagu faanin, waa koox aan labo eray ka sheegi karin astaanta iyo calanka xisbiga, balse la soo boodaya arrimo hoose iyo mullacyeyn qarsoon oo lagu xafidsiiyay guryaha dhexdooda.
Waa niman hebelo xilkood ku socda oo aan marna ka fikin dannaha guud ee ummadda, talaabo kasta oo dawladdu qaadana waxay u arkaan mid reerro loogu daneynayo. Waana ayaan darada haysata saaxiibada halka kan ku bahoobay. Waana wadaado raba haaneedka hasha maandeeq iyo dufanka dalka, waayo waxay u arkaan in hoggaaminta hasha tan lagu hodmay, oo maba oga in rag ku caydhoobeen jiritaanka hasha maandeeq.
Waa qaybta ugu awoodda yar xisbiga waddani guddihiisa dal iyo dibedba, waa niman xuub caaro ku hoos jira, oo an marna cartami karin, waa niman ka cadhooday hebello ka ag dhaw oo shaqo iyo xilal ka haya dawladda oo doonaya in ay maalmo ka soo booteeyaan xisbiga Waddani.
Waa kooxo lagu qurxiyo sawirada la soo dhigo baraha bulshada oo loo yeedho kaliya maalinta sawir la galayo. Waa niman loo yeedhiyo hadalka iyo sheegmada warbaahinta, waa niman an far dhaqaajin karin ilaa Waddaniga dhaarsani fasaxo mooyee. Waa niman lagu abuuray jaar nacayb iyo dhawe dilaal oo u ooman fadhiisiga meel madhan oo maamuus ah.
Dhanka kale haddii aad aragto qaar ka tirsan Waddaniga Dhaawacan oo isku dayana in ay sharax ka bixiyaan calanka, midabka iyo astaanta xisbiga waddani, waa niman loo dhiibay wax Waddaniga Dhaarsani sharixi kari waayay. Maxaa wacay astaanta iyo calanka xisbiga Waddani waxaa hore u sharixi kari waayay guddoomiye Cirro iyo ku xigeenkiisii hore. Sidaa darteed ma ka dhagaysan karaa sharaxa iyo macneynta calanka iyo astaanta xisbiga wiil yar oo ka tirsan Waddani dhaawacan.
Kooxdan waxaa ku jira dhallaan iyo yar yar la waalay oo balan qaadyo kursi iyo ka xoolaysiga dalka loogu sacab tumay muddo dheer, deetana iska rumaystay hawraartan silloon oo hadh iyo habeen la soo taagan wax baa la cunnay. Kooxdani ma aaminsana waddaniyad iyo aragti, balse waxa maankooda hadhiya danaysi iyo calool galin maalinneed. Waana koox koox kale dabbo taal, macnaha waa reerka reerka dabayaal ayaannu sii dabo naal. Mana aha koox lagu aamini karo aragti qaran iyo talo qaran badbaadin karta.
Guntii iyo gunnaanadkii Waddani dhaarsan iyo Waddani dhaawacan waa laba kooxood oo kala aragti iyo hayaan duwan, balse ka midaysan qorsheynta boobka iyo ka xoolaysiga hantida ummadda. Waa labo kooxood oo ka midaysan aragti qaran la’aan iyo habacsanaan qorshe qaran la’aanneed.
Waa labo kooxood oo kala sareeya oo labo bulsho ka kala tirsan. Waa labo kooxood oo an u sinneyn talada iyo hoggaaminta xisbiga balse soo wadda galaya sawiro fasir dhiilo huwan. Waa labo kooxood oo fasirka midabka calanka iyo astaanta xisbiga ka barakaysta, haddee midabka calanka iyo astaanta xisbigu ma aha laga barakaysto bulsho muslim ahaan “Hindus iyo Budhism ka ayaa ka barakaysta” ee waa mid astaan siyaasadeed iyo aragti dal dhis loo isticmaalo., haddii aad fahmaysaan. Waa labo nooc oo aan dalka iyo dadkaba lagu aamini karin, waxaana intaa wehelisa hoggaan jilicsan oo korkiisa lagu addeeggan karo.